Ciidamada Kenya oo duqeyn cirka ah ka geystey deegaano ku yaal xadka Soomaaliya - Jowhar Somali Leader
Home Somali Ciidamada Kenya oo duqeyn cirka ah ka geystey deegaano ku yaal xadka...
Ciidamada Kenya oo duqeyn cirka ah ka geystey deegaano ku yaal xadka Soomaaliya
Ciidamada Milatariga Kenya ayaa duqeeyn cirka ah ka geystay deegaano ku yaal xadka kala qeybiyo Soomaaliya iyo Kenya kadib markii dagaalamayaal Alshabaab ah ay weerareen saldhig boolis oo ku yaal deegaanka Khorof Kharar oo ka tirsan Wajir.
Sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada Kenya duqeyntan oo dhacday xalay ayaa lala beegsaday deegaano la aaminsan yahay inay ku dhuumanayeen Al-Shabaab.
Taliyaha ciidamada Milatariga Wajir Thoman Ngeywa ayaa u sheegay wargeyska the Nation in waxyeelo gaarsiiyeen qaar ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab.
“Ciidamadeena cirka waxa ay duqeeyeen xilli habeenimo ah iyadoo taasna ay jawaab u ahayd weerarkii nalagu soo qaaday,waxaan tuhmeynaa in qasaaro culus uu soo gaaray kuwii weerarka ka dambeeyay.”ayuu yiri sarkaalkan.
Weerar ay ku qaadeen dagaalamayaal Al-Shabaab ka tirsan subaxnimadii shalay ayaa waxa ay ku burburiyeen xarun ay leedahay shirkada isgaarsiinta Safaricom.
Sidoo kale dagaalamayaasha ayaa hore u sii qaatay illaa saddex qori iyo hub kale. Goobta ay Al-Shabaab weerareen ayaa lagu magacaabaa waxana ay u jirtaa illaa 30km xadka kala qeybiya Soomaaliya iyo Kenya.